Shir Heersara ah oo ururka Dhalinyarada Ogaadeeniya Ay ku Qabteen Magalada Nairobi Sawiro | ogaden24
Shir Heersara ah oo ururka Dhalinyarada Ogaadeeniya Ay ku Qabteen Magalada Nairobi Sawiro
Masuuliyiin ka kala Tirsan mamulka Ururka OYSU oo in muda ah Hawlo shaqo ugu maqnaa wadanka Ogadenia, ayaa shir kuqabtay magalada Nairobi ee xarunta wadanka Kenya.
Shirka ayaa waxaa warbixin Guud oo xaalada dalka iyo is badalka kadhacay laxidhiidha waxaa looga dhagaystay mudane Cabdi Faarax oo kamid ahaa masuuliyiintii ugu Horaysay ee Gudaha wadanka Ogadenia Galay, kana bilaabay Hawlaha Abaabulka iyo Wacyigalinta bulshada iyo mudane Cabdixakiin Mursal oo isna kamida mamulka Ururka OYSU.
Labada masuul ayaa xubnaha Ururka waxay si Qota-dheer ugaga warameen xaalada wadanka oo markii Hore ahayd mid aad u dhib badan, balse Haatan kasoo raynaysa dadkuna siwayn usoo dhoweeyeen is badalada xawliga kusocda oo ay ku diirsadeen.
Mudane Cabdi Faarax ayaa sheegay in markii ay Gudaha Galeen ay Layaab iyo Qaadan Waa ku ahayd ruux kaste oo Arka calanka ONLF oo si xor ah masuuliyiinta iyo xubnihii Gudaha Galay ay wataan, kaasi oo ahaa Halista ugu wayn ee si fudud ruuxu Naftiisa ugu waayo karo balse ay iyagu u badheedheen si ay shacabkooda ugu baraarujiyaan is badalka dhacay iyo Go’aankii Jabhadu Qaadatay.
Waxaa uu mudane Cabdi Faarax sheegay in shacabku si aada ugu Farxeen Go’aankii Jabhadu Qaadatay balse in muda ah ay is Gaabinayeen, maadaama ay soo mareen dhibaato aad u daran oo dhan kaste ah Aakhirkiisa ay shacabku xaqiiqsadeen inay muujiyeen dareenkooda ayna si buuxda u Garab istaagaan Jabhada ONLF oo Naf iyo Maalba ay u Hureen.
Sawirada Halkan Riix
Dhiniciisa mudane Cabdixakiin Mursal ayaa sheegay in shacabka Ogadenia ee Guduhu wax kaste oo ay soo mareen ay kaga soo Kabteen is badalada Neecawda Xoriyadeed xambaarsan oo si Kal iyo Laab ah ay usoo dhoweeyeen, haatana ay Fahmeen doorka ugu wayn inay iyagu ku leeyihiin sidii is badal dhab ah oo Horseeda Xornima buuxda ay kaalintooda uga Qaadan lahaayeen.
Shacabku waxay Qaateen Go’aan Geesinimo leh oo ah in Halgankii Qoriga ee Qalinka loo badalay inay ka midha dhaliyaan, waxaana min magaalo ilaa Gabadha Adhiga Lajoogta iyo Wiilka Geel Jiraha ah ay ku Hadaaqayaan ONLF inay tahay Tan kaliya ee rabitaankooda ka Turjumaysa” ayuu mudane abdifarax oo intaas kudaray inaysan Hawli Koow Joogin.
Waxaa uu sheegay abdifarah inay lama Huraan tahay inay Jaaliyadaha iyo Ururka OYSU ee Qurbaha kudhaqani sii xoojiyaan Hawlihii ay Halganka u Hayeen si looga midha dhaliyo Hadafka Rasmiga ah ee shacabka Ogadenia oo ah Helitaanka Xoriyad buuxda ee dadkeenu Gaadho.
Shirka ayaa waxaa lagu soo dhoweeyay xafladii balaadhnayd ee lagu Qabtay magalada Jigjiga ee lagu midaynayay ciidanka Jabhada Wadaniga Xoraynta Ogadenia iyo ciidanka DDS, kuwaasi oo muda dheer cadawga Itobiya iska Horkeenkooda Xoog iyo Xoolaba kubixiyay.
Shirka ayaa ugu dambayntii ugu baaqay Guud ahaan shacabka Somaalida Ogadenia Gude iyo dibad ba in si buuxda loo Garab istaago dadaalka JWXO ugu Jirto Hanashada Wixii aan Raadinaynay oo ah Xoriyad dalka si looga midho dhaliyo Hadafkii Jidka dheer loo soo maray ee xoriyad Gaadhsiinta dalka iyo dadkeena.
Shirkan waxaan laysku raacay Midnimo iyo in gacmaha lays qabsado sharar badan oo kalana laqabto